Semalt एक Scraper कार्यक्रम को सुविधाहरु तपाइँ बारे जान्नु पर्छ
एक स्क्र्यापर प्रोग्रामले स्वचालित रूपमा विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा वा सामग्री निकाल्दछ। यसले HTML कागजातहरू, PDF फाईलहरू, र पाठ कागजातहरू सजिलैसँग पढ्न सक्दछ र स्क्र्यापहरू उपयोगी र अर्थपूर्ण जानकारी हाम्रा आवश्यकताहरू अनुसार। विकासकर्ताहरूले विभिन्न कार्यहरू गर्नको लागि खुरचुरो प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू मुख्य रूपले गतिशील वेबसाइटहरू र सामाजिक मिडिया साइटहरूलाई उपयोगी जानकारी प्राप्त गर्न र यसलाई पढ्न योग्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्न लक्षित गर्दछ। इन्टरनेटमा सयौंदेखि हजारौं स्क्र्यापि programs प्रोग्रामहरू छन्, र ती सबैको विशिष्ट सुविधाहरू र गुणहरू छन्।
यहाँ हामीले तपाईंको खुरचुरो प्रोग्राम हुनुपर्दछ भनेर सबै भन्दा अचम्मका विशेषताहरू छलफल गरेका छौं।
१. विभिन्न थ्रेडहरूमा डाटा निकाल्नुहोस्:
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले रोज्नु भएको कार्यक्रमले विभिन्न थ्रेडहरूमा जानकारी निकाल्न सक्छ र एकै समयमा धेरै कार्यहरू गर्न सक्दछ। Import.io र Kimono ल्याबहरू दुई स्क्र्यापि services सेवाहरू हुन् जुन वेब पृष्ठहरू र फसल काट्ने डाटालाई क्रॉल गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले धेरै थ्रेडहरू चलाउँदछन् र तपाईंको ब्राउजि experience अनुभव बेवास्ता गर्दछन्। तपाई 30० वटा वेब पृष्ठहरु बाट डेटा स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समय र उर्जा बचाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको कार्यक्रमले ठूलो प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ, तपाइँले यसलाई चाहेको डेटालाई स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
२. वेब पृष्ठहरू द्रुत रूपमा लोड गर्नुहोस्:
यो एक सबैभन्दा विशिष्ट सुविधाहरूमध्ये तपाईंको स्क्रेपर प्रोग्राममा हुनुपर्दछ। यदि यो तपाईंको वेब पृष्ठहरू छिटो गतिमा लोड गर्दछ भने, तपाईंले तत्काल यसको लागि अप्ट इन गर्नु पर्छ। ParseHub एक उपयोगी स्क्र्यापिंग सेवा हो जुन बिभिन्न साइटहरूबाट जानकारी ल्याउँदछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि गुणस्तर परिणामहरू सिर्जना गर्दछ। यसले AJAX जस्ता असिंक्रोनस अनुरोधहरू पनि सिर्जना गर्दछ र तपाईंको काम सजिलो बनाउँदछ। यस्तो प्रोग्राम उद्यमहरू र प्रोग्रामरहरूको लागि उपयोगी छ। तपाईं विभिन्न HTML कागजात र पीडीएफ फाइलहरूबाट सामग्री निकाल्न सक्नुहुन्छ, साथै लक्षित बहु छविहरू र भिडियो फाइलहरू।
Social. सोशल मिडिया साइटहरुबाट जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्:
गतिशील साइटहरू, समाचार आउटलेटहरू, र ट्राभल पोर्टलहरूबाट डाटा स collect्कलन गर्न र स्क्र्याप गर्न सजिलो छ। तर यदि तपाइँको स्क्रेपर प्रोग्रामले फेसबुक, लिंक्डइन र ट्विटरबाट जानकारी प्राप्त गर्न र निकाल्न सक्छ भने, तपाइँले यसलाई प्रयास गर्नु पर्छ। इजि वेब एक्स्ट्र्याक्ट एक शक्तिशाली स्क्र्यापर हो जसले नौसिखिया प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलै र सुविधाको साथ सामाजिक मिडिया नेटवर्कबाट जानकारी काट्न सक्षम गर्दछ। यसले विभिन्न फेसबुक समुदायहरू र यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि लिंक्डइनबाट अर्थपूर्ण डाटा स्क्रैपहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
Aut. स्वचालित परियोजनाहरू कुनै पनि समय:
राम्रो स्क्रेपर प्रोग्रामले यसको प्रयोगकर्ताहरूको प्रोजेक्टहरूलाई स्वचालित गर्छ र तिनीहरूको समय र उर्जा बचत गर्दछ। अक्टोपार्से प्रोग्रामरहरू र उद्यमहरूका लागि उत्तम विकल्प हो। तपाईं आफ्नो डाटा निकासी परियोजनाहरू अनुसूचित गर्न सक्नुहुनेछ वा यो सेवालाई यसको आफ्नै वेब स्क्र्याप ई tasks्ग कार्यहरू गर्न दिनुहोस्। यो लगभग सबै वेब ब्राउजरहरू र विन्डोज, लिनक्स, र म्याक सहित अपरेटिंग प्रणालीसँग उपयुक्त छ।
Any. कुनै पनि ढाँचामा डाटा निर्यात गर्नुहोस्:
IWebTool लिंक एक्सट्रक्टर र लिंक एक्सट्रैक्टरको साथ, तपाईं केवल इच्छित डाटा निकाल्न सक्नुहुन्न तर यसलाई तपाईंको मनपर्ने ढाँचामा निर्यात पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसले मुख्यतया CSV, XML, पहुँच, HTML, SQL सर्भर र MySQL लाई समर्थन गर्दछ र तपाईंलाई सटीक र विश्वसनीय परिणामहरू प्रदान गर्दछ। हामी ODBC जडान मार्फत कुनै पनि प्रकारको डाटाबेस गन्तव्यमा परिणामहरू प्रतिबद्ध गर्न सक्छौं। यो साना र मध्यम आकारको व्यवसायको लागि उपयुक्त छ र एकै समयमा वेब पृष्ठहरूको ठूलो संख्यामा स्क्र्याप गर्दछ।